Paris Oo La Daaladhacay Rabshado Ka Dhasahay Xeeraraka Qabyo Qoraalka |
Paris Oo La Daaladhacay Rabshado Ka Dhasahay Xeeraraka Qabyo Qoraalka
Tobannaan dibadbaxayaal ah ayaa waxa ay isku-dhaceen booliska caasimadda Faransiiska ee Paris, halkaas oo ay ka dhacayaan dibadbaxyo horleh oo loogaga soo horjeedo qabyo qoraal ammaanka ku saabsan.
Booliska ayaa dadka la afuufay sunta dadka kaga ilmaysiisa kaddib markii dibadbaxayaal wajiga soo dabooshay ay dariishado burburiyeen dhowr baabuurna ay dab qabadsiiyeen.
Ku dhawaad boqol isu soo bax ayaa waxaa Sabtidii la qorsheeyay in guud ahaan ay dalkaas ka dhacaan iyadoo dadku ay ka soo horjeedaan hindise sharciyeed meesha ka saaraya in sawirro laga qaado booliska.
Dadka arrintaas ka soo horjeeda ayaa waxa ay sheegayaan in arrintaas ay wax u dhimayso xorriyadda saxaafadda diiwaangelin laheyd dhibaatada uu boolisku gaysto.
Faransiiska ayaa waxaa ka dhacayay dibadbaxyo todobaadyo socday oo hindise sharciyeedkaas loogaga soo horjeeday, iyadoo dibadbaxyadu ay sii xoogaysteen markii uu soo shaacbaxay muuqaal tusinaya saddex askari oo boolis caddaan ah oo midab ahaan ugu tacaddiyaya garaacayana nin madow oo muusikada soo saara.
Waxa dhacay isagoo ka jawaabaya, ayaa xisbiga haya talada dalkaas ee Madaxweyne Emmanuel Macron waxa uu todobaadkii tegay sheegay in qeyb ka mid ah sharciga dib loo qoro. Sikastaba xaalku ha ahaadee, arrintaas waxba kama aanay badelin dadka arrintaas ka soo horjeeda.
Jimcihii Mr Macron ayaa waxa uu qiray “waxaa jira boolis rabshoole ah” waxa uuna sheegay in “loo baahan yahay in la ciqaabo”, arrintaas oo uu ku sheegay wareysi toos uu u siinayay warbaahinta Brut, oo ah mid internetka ku baxda wararkeedana diiradda lagu saaro dhalinyarada.
Kumannaan qof, oo ay ku jiraan xubnaha dowladda ka soo horjeeda ee dhaqdhaqaaqa Jaakadaha Huruudda, ayaa waxa ay si nabad ah isugu soo baxayeen caasimadda markii qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo soo xirtay dhar madow wajigana soo datay ay bilaabeen inay tuuryeeyaan booliska la dagaallama rabshadaha, waxaa sidaasi ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Waxaa la burburiyay dariishadaha suuq yare, wakaalad iyo bangi, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP, booliskuna waxa uu ka jawaabay rabshadda oo waxa uu ganay sunta dadka kaga ilmaysiisa.
Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa waxa ay waddada dhexdeeda ka sameysteen baro koontorool oo ay dab qabadsiiyeen, intaas ayey ku dartay wakaaladdu.
Booliska Paris, ayaa taleefishinka BFM TV, waxa uu ka soo xigtay inay sheegeen in ku dhawaad 500 oo qof oo rabshadwadayaal ah ay ku soo dhex dhuunteen dibadbaxa. Wasiirka Arrimaha Gudaha Gerald Darmanin ayaa sheegay in 22 qof loo xiray dhacdooyinka.
Boolis badan ayaa loo daadgureeyay caasimadda si la isugu dayo in iskudhacyadii rabshadaha watay ee la arkay dabayaaqada todobaadkii hore oo kale ay soo laabtaan, kuwaas oo isla sharcigaas loogaga soo horjeeday, halkaas oo tobannaan qof ay ku dhaawacmeen.
Dibadbaxayayaal nabdoon ayaa waxa ay isugu soo baxeen daafaha kale ee Faransiiska oo ay ku jiraan magaalooyinka Marseille, Lyon iyo Rennes.
Wareysiga uu siiyay Brut Jimcihii, ayuu Madaxweyne Macron ku cambaareeyay rabshadihii Paris ka dhacay, kuwaas oo uu ku eedeeyay “dad wareersan”.
Qodobka 24-aad ee hindise sharciyeedka ayaa dambi ka dhigaya in la daabaco sawirrada askar boolis ah oo shaqo ku jira oo ku hamiyaya inay “jir ahaan iyo sharaf ahaanba” cid waxyeelleeyaan.
Waxa uu qodobku sheegayaa in ciddii arrintaas ku xadgudubtaa ay wajihi doonto xarig sanad ah lana ganaaxi doono €45,000.
Dadka u doodaya sharcigaas ayaa sheegaya in qodobkaas uu booliska ka ilaalinayo in la handado iyo in lagu bartilmaameedsado baraha ay bulshada ku wada xiriiraan.
Hasayeeshee dadka dhaleecaynaya ayaa sheegaya in xorriyadda warbaahinta iyo xaqa muwaadinka uu u leeyahay inuu duubo falka booliska aanay aheyn in meesha laga saaraa, xilli booliska Faransiiska haatan lagu wado daraasad culus oo ku aaddan eedo ah inay ku dhaqaaqeen midab kala sooc.
Muuqaallo laga duubay Michel Zecler oo soo saaro miyuusikada ayaa muujinaya isagoo la darbaynayo oo lagu dhex feerayo istuudiyihiisa ku yaal magaalada Paris, markaas oo bishii la soo dhaafay ay falkaas kula kaceen saddex askari oo boolis ah oo caddaan ah, arrintaas oo ay dadka dalkaas aad ula anfariireen, siina kicisay dadka ka soo horjeeda hindise sharciyeedka.